ယူရို-၂၀၂ဝပြိုင်ပွဲအတွင်း ဘယ်ကစားသမားက ဂိုးသွင်းအများဆုကို ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်မလဲ? – MySport Myanmar
ယူရို-၂၀၂ဝပြိုင်ပွဲအတွင်း ဘယ်ကစားသမားက ဂိုးသွင်းအများဆုကို ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်မလဲ?
ယူရို-၂၀၂ဝပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ အခုဆိုရင် ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ထိ ရောက်ရှိလို့နေပြီဖြစ်တာကြောင့် ဒီအချိန်မှာ ပြိုင်ပွဲအတွင်း အောင်မြင်မှုရနိုင်မယ့်အသင်း ပြိုင်ပွဲတလျှောက် အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာနိုင်မယ့်သူနဲ့ ဂိုးသွင်းအများဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာမယ့်သူတွေအကြောင်းကို ပိုမိုပြောဆိုလာနေကြပြီး ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးထဲကမှ ဂိုးသွင်းအများဆုံးဆုအကြောင်းကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးသွားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
လက်ရှိ ယူရို-၂၀၂ဝပြိုင်ပွဲအတွင်း သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားများ
ရော်နယ်ဒို(ပေါ်တူဂီ) – ၅ဂိုး
ပက်သရစ်ရှစ်ခ်(ချက်) – ၅ဂိုး
ဘန်ဇီမာ(ပြင်သစ်) – ၄ဂိုး
ဖောလ်စ်ဘတ်(ဆွီဒင်) – ၄ဂိုး
လူကာကူ(ဘယ်ဂျီယံ) – ၄ဂိုး
ရှာကွီရီ(ဆွစ်ဇာလန်) – ၃ဂိုး
စတာလင်(အင်္ဂလန်) – ၃ဂိုး
ဒိုးလ်ဘတ်(ဒိန်းမတ်) – ၃ဂိုး
ဟာရီကိန်း(အင်္ဂလန်) – ၃ဂိုး
လီဝန်ဒေါစကီး(ပိုလန်) – ၃ဂိုး
ဆယ်ဖယ်ရိုဗစ်(ဆွစ်ဇာလန်) – ၃ဂိုး
ဝိုင်နယ်ဒန်(နယ်သာလန်) – ၃ဂိုး
ဆာရာဘီယာ/ဖယ်ရန်တောရက်စ်/မိုရာတာ(စပိန်) – ၂ဂိုး
အင်မိုဘီလီ/အင်ဆစ်ဂနီ/လိုကာတယ်လီ/ပက်ဆီနာ(အီတလီ) – ၂ဂိုး
မေလာ/ပေါလ်ဆန်(ဒိန်းမတ်) – ၂ဂိုး
ဒီအခြေအနေအရဆိုရင် လက်ရှိ ယူရိုပွဲစဉ်တွေကို ဆက်လက်ကစားဖို့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အသင်း(၄)သင်းထဲက ကစားသမားတွေထဲကမှ ဟာရီကိန်း စတာလင် ဒိုးလ်ဘတ်တို့လောက်သာ အခွင့်အရေး ကျန်ရှိနေတော့တာဖြစ်ပြီး သွင်းဂိုး(၅)ဂိုးစီနဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ ရပ်တည်နေကြတဲ့ ရော်နယ်ဒိုနဲ့ ပက်သရစ်ရှစ်ခ်တို့ထဲက ဂိုး(၁)ဂိုးကိုပါ ဖန်တီးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုက ဒီဆုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အခြေအနေကောင်းလို့နေရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီတိုက်စစ်မှူး(၂)ယောက်ကို အမီလိုက်နိုင်မယ့်သူက အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူး ဟာရီကိန်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိန်းက ဒီနောက်ပိုင်း (၂)ပွဲဆက်တိုက်မှာ ဂိုးမြူးနေတာဖြစ်သလို အထောင်တိုက်စစ်ကစားသမားလည်းဖြစ်လို့ ဒိန်းမတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပွဲမှာ သူရဲ့သွင်းဂိုးတွေကို မြင်တွေ့လာရနိုင်သလို အင်္ဂလန်သာ ဖိုင်နယ်ကို တတ်လှမ်းမယ်ဆိုရင် ဖိုင်နယ်မှာပါ သူ့သွင်းဂိုးက ဆက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟာရီကိန်းဟာ နောက်ထပ်သွင်းဂိုး(၂)ဂိုးကိုလည်း သွင်းယူဖို့ လိုအပ်နေသေးသလို တကယ်လို့ (၅)ဂိုးချင်း တူညီသွားခဲ့ရင်တောင်မှ ရော်နယ်ဒိုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ နောက်ထပ်သွင်းဂိုး(၁)ဂိုး ဒါမှမဟုတ် ဂိုးဖန်တီးမှု(၁)ကြိမ် လိုအပ်ဦးမှာဖြစ်လို့ ဒါကို ကိန်းအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
MySport Myanmar2021-07-05T15:30:27+06:30July 5th, 2021|All Posts, Football, La Liga, Premier League, Serie A, World|